Wax Ka Baro Su'aalaha Hogaamiyaha Wanaagsan Is Weydiiyo - Daryeel Magazine
Wax Ka Baro Su’aalaha Hogaamiyaha Wanaagsan Is Weydiiyo
SIDEE WAX KA WANAAGSAN U SAMAYN KARNAA?
Hogaamiyaha saxda ahi kuma fakaro oo kaliya sida howsha waqtigaa lajoogo loo qaban lahaa ee waxa uu kasii baaraan-dagaa oo ku sii fakaraa sidii uu u horumarin lahaa hawl kastaa ee waqtigaa jirta. Sidii uu usii wanaajin lahaa dhanka tayada, macaash ka iyo casriyeynta intaba. Ma ahan mid ku nagaada waxa markaa jira ee waa hanqal taage joogto ah.
2. YAA QABAN KARA HAWSHAN?
Waxaa sidoo kale lagu soocaa hogaamiyaha saxda ah xulida iyo raadinta kartida iyo aqoonta shaqaala hiisa ama dad ka lashaqeeya. Marka hawl adagi timaado ma ahan mid iska dhiga wax-walba yaqaan, ee waxa uu soo bandhigaa hawsha taalaa markaa, waxana uu raadiyaa cida qaban karta hawshaa karti iyo xirfad ahaanba. Waa mid si hagar la’ u adeegsada dad ka.
3. AAN WADA SAMAYNO.
Ma ahan kaligii taliye faan badan oo jecel in keli-keli loo shaqeeyo ee waa isku keene awooda iyo aqoonta shaqaalaha. Soomaalidu waxa ay ku maah-maah daa ‘ FAR KALIYA FOOL MA DHAQDO” oo macnahee noqonayo marka aan tusaale ugu soo qaadano qormadan in hawsha qof kaliya qabto iyo midda dad badani wadaagaan ay kala wanaag sanaato. Hogaamiya saxda ahi , waxa uu dhiiri galiyaa WADA shaqayn ta. Waxa kuu ka fogaadaa KALI shaqayn ta. Taasina waxa ay abuurta kalsooni iyo wax badani wanaag sanaadaan madaama laWADAqabanayo howsha. Wadda shaqayntu waxa ay abuurtaa in laga faa’idayso awooda, kartida, fikirta, xirfada, iyo aqoonta shaqsi kasta ee shaqaalaha kamid ahi gaar u leeyahay.
4. MAXAA INOO XIGA.
Hawl kasta ee markaa la dhameeyo macnaheedu ma ahan in hawshii oo dhan ay dhamaatay ee hogaamiyada wanaagsani waxa uu sii wadaa hawshii oo ku dhaqaaqaa waxa ku xiga ee markaa ay tahay in la sameeyo.
Ma ahan oo kaliya 4 taa arrimood ee waxaa jira qodobo ilaa taban ah ee aan ka dari doono hadii alle idmo.
Wax Ka Baro Xanuunka Qoor-Gooyaha Wax Ka Baro Hababka Looga Hortago Guuldarada